Talata fahaenina fankalazana ny Paka – Trinitera Malagasy
Talata fahaenina fankalazana ny Paka
Asa 16, 22-34/
Md Joany 16, 5-11
Ny Vakiteny voalohany moa milaza ny nikapohana an’i Paoly sy Silasy ary ny nanaovana azy ireo an-tranomaizina. Ny antony dia satria nisy olona nanana andevovavy mpisikidy izay nentin’ilay tompony nifetsy ny olona hahazoana vola. Noroahin’i Paoly ny demony nangeja io andevovavy io ka afaka, ary mazava loatra fa very fihinanana ilay tompony. Noho ny fahatezerana no nanendrikendrehany an-dry Paoly ho mpanakorontana tanàna sy mpampianatra fomba tsy azon’ny Romanina atao.
Ny horohoron-tany, mateti-pitranga amin’iny faritra iny, saingy fahagagana no ilazan’ny mpanoratra azy eto, no nentin’Andriamanitra namaly ny fiderana Azy nataon’i Paoly sy Silasy, ka namahany ny fatoran’ny mpifatotra rehetra. Ary satria ny fahafatesana no miandry ny mpiambina raha sanatria milefa ny gadra (Asa 12, 19; 27, 42) dia saika hamono tena ilay mpiambina saingy nosakanan’i Paoly. Izany fitiavana izany no nampisokatra ny fony ary nahafahany nihaino ny Teny sy niandrandra ny famonjena, ka nangatahany hatao Batemy io alina io ihany miaraka amin’ny tao an-tranony rehetra.
Tsipihin’i Md Lioka fa marika hitarafana ny fibebahana marina ny fitsinjovana ny fahorian’ny hafa, ka ny zavatra voalohany nataon’ilay mpiambina dia ny nitondra an’i Paoly sy Silasy tany an-tranony sy nanasa ny ferin’izy ireo. Tsy natahorany intsony ny ho faty, satria zavatra tsy azony atao avy izany, araka ny lalàna. Ny finoana marina dia mitondra hafaliana feno mandrakariva ho an’izay mandray sy mivelona azy.
Finoana no hahafahan’ny Mpianatra mahita fa mahasoa ny handehanan’i Jesoa, ka hahafahan’izy ireo mandray ny Fanahy Mpanafaka alahelo (παράκλητος parakletos). Tsy hisy hanontany hoe ho aiza Izy, na dia tsy mbola azon’ny mpianatra aza fa ny fahafatesany dia ny fiombonany amin’ny Ray sy ny rahalahiny (iantsoan’i Kristy tafatsangan-ko velona ny mpianany: Jn 20, 17). Ny fitsanganan-ko velona, ny Paka ankalazaintsika dia ny fandalovana avy amin’ny alahelo ho amin’ny hafenoan’ny hafaliana, ka hahafahana mibanjina ny asan’ny Fanahy, omen’i Kristy ny Mpianany avy eo ambonin’ny hazofijaliana (Jn 19, 30).
Roa ny asan’ny Fanahy: handresy lahatra izao tontolo izao (evanjely anio) ary hitari-dalana ny Mpianatra ho amin’ny hafenoan’ny fahamarinana (Jn 16, 12-15, rahampitso). Tsy hiampanga (Satana) an’izao tontolo izao Izy fa handresy lahatra (ἐλέγχω elenKo):
– ny amin’ny fahotana, izany hoe hampahafantatra an’izao tontolo izao fa fahotana ny tsy finoana fa i Jesoa no Zanak’Andriamanitra, ka hanampy an’izay manameloka an’i Jesoa hiaiky fa Izy no ilay mpamonjy an’izao tontolo izao (Jn 4, 42), Izy no ilay Zanak’ondry manala ny fahotan’izao tontolo izao (Jn 1, 29);
– ny amin’ny fahamarinana, izany hoe haneho amin’ny olona ny hatsaran’ny fitiavana neken’i Jesoa hatramin’ny fahafatesana ka nanandratan’ny Ray Azy any amin’ny voninahitra, hahavaky bantsilana ny laingan’i Satana, ka hanehoan’ny Fanahy amin’izao tontolo izao fa tsy faharesena tsy akory ny Lakroà fa fandresen’ny fitiavana. Ny fahamarinana dia i Jesoa maty, miverina mankany amin’ny Ray.
– ny amin’ny fitsarana, satria ny filohan’izao tontolo izao nanameloka an’i Jesoa no voatsara; nasehon’Andriamanitra fa ny Lakroà no fitsarany ny ratsy sy nanavotany an’izao tontolo izao ka hanalàny an’izay mino Azy tsy ho eo ambany fahefan’ny filohan’izao tontolo izao (Jn 12,31; 14,30, 16, 33).
Izay manaiky hotarihin’ny Fanahy no afaka hihira ny Salamo 137, hidera ny Tompo amin’ny fo tontolo, satria mihaino vavaka Izy, hatsaram-po sy fahamarinana ka mamaly amin’ny andro iantsoana Azy, manome hery ny fanahy ary mamaly soa ny ratsy vita tamin’ny mpanompony. Alaivontsika sary an-tsaina hoe i Jesoa, eo ambony hazofijaliana, avy mivavaka ny Salamo 22 (Andriamanitra o, nahoana no dia nilaozanao aho) dia mihira ity salamo ity koa.
Tsy nanafaka Azy tamin’ny fahoriana ny Ray, fa nanome Azy kosa ny hery, hijoroana vavolombelona. Mihaino vavaka Andriamanitra, satria ny vavaky ny Mpanompony dia ny mba hanjakan’ny fitiavana, ny hahanany hery hanao izay nandidiany mba hahalalan’izao tontolo izao ny fitiavana hifalonorany amin’Andriamanitra Rainy (Jn 14, 31).
Ho haintsika anie ny hihaino ny bitsiky ny Fanahy ka hiara-paly amin’ny fandresen’i Kristy an’izao tontolo izao.
Alarobia fahaenina fankalazana ny Paka